China Contrast Sensitivity MeterRM800 Kugadzira uye Fekitori | SDK
1. Iyo yechinyakare yekuona acuity yekutarisa inoshandisa dema uye chena visual index (ziso chati) kutarisa kutaridzika kwekugadzirisa, uye hazvigoneke kuyera kugona kwechiono kusiyanisa kusiyana kwakasiyana.
2. Mune ophthalmology, zvinotarisirwa kuti mashandiro echikamu chekuratidzira cheiyo inoonekwa uye mashandiro eitina kuuropi ruzivo rwekugadzirisa hurongwa hunogona kuyerwa uye kuongororwa zvakasiyana. Nekudaro, iyo inoona acuity chati inoyera iko kuona kweyeyese inoonekwa system.
3. Dzivisa kushandisa laser senzvimbo yechiedza kuyedza kusiyanisa kwekunzwa kweziso remunhu.
Iyo RM800 yekusiyanisa manzwiro emamita inounza musiyano wekuchinjisa basa mune inoonekwa sisitimu yekuona uye kuongorora iwo mufananidzo wemhando weziso remunhu. Ichi chishandiso chinoumbwa neyakajeka system, mechimiro chimiro, yemagetsi wedunhu uye imwechete-chip yemagetsi komputa. Iyo mhando nyowani yeanyowani-yemagetsi-yemagetsi kusangana kusangana chimbo chekuona basa. Chimbo chinoshandiswa kuburikidza nekombuta yemurume-muchina interface uye inoziva otomatiki yekuongorora modhi. Panguva imwecheteyo, inogona kuchengeta nekugadzirisa ruzivo rwechinhu chinoonekwa, uye zvakare inogona kuitisa kubvunza kwekure kuburikidza nemambure. Icho chirongwa cheruzivo che optometry medical technology.
1: Yakazara otomatiki yekubata skrini yekudzora, iri nyore uye inonzwisisika mashandiro.
2: Iyo data yakayerwa nemurwere inochengetwa munguva chaiyo.
3: Zvinoenderana neyakawanikwa data, iyo ongororo inogona kuratidzwa zvakananga pane iyo IVA uye CSF curves.
4: Inogona kushandiswa kumeso bvunzo.
5: Kukanganiswa kwemipendero maonero (maziso ekudzokorora) anogona kuongororwa zvakasiyana kune varwere vecataract.
6: Iyo kusiyanisa kunzwisisika kweiyo retina yevarwere vekatarati inogona kuongororwa muzvikamu.
7: Murwere kudhinda data, anodhindisa mishumo inogona kupihwa.
1. Spatial frequency renji:
1.8; 3; 6; 12; 18; 24 (Chikwata: CPD) Yakakwira-frequency yekuona chiyero chinodiwa nemapoka akasarudzika senge echiuto: ≥24 (Chidimbu: vhiki / degree)
2. Rima gadziriro bvunzo:
50S, 6 magiya anowanikwa.
3, iyo yese kuyera kuyera:
Pedyo nechikamu: 0.4 metres Chikamu chepakati: 0.8 metres 1.5 metres Chikamu chiri kure: 5 metres
4. Enzanisa kunzwisisika kuyera nguva:
9 mazinga (1% / 6% / 9% / 12% / 20% / 30% / 45% / 66% / 100%)
5, yakayerwa nharaunda bvunzo:
Mhete inopenya (yakajairwa) Nharaunda yakasviba / shandura kupenya uye kudzima.
6. Kukurudzira kwemavara:
7.Kuona chimiro chakatarwa:
8, graphic mushumo:
9, chengetedzo yeruzivo:
Unogona kuita nekukurumidza komputa graphic ripoti kudhinda.
Ruzivo rwe data rwakachengetwa mumushini mumwe chete, uye ruzivo rwemunhu chero upi zvawo runogona kuwanikwa munguva chaiyo yekuenzanisa pamberi uye shure.
Standard kumisikidza All-in-one komputa
Pashure: Kuvhiya kweziso maikorosikopu SOM2000D
Zvadaro: Corneal curvature mitaBL-8002
Kusiyanisa Kunzwisisa Meter
Optical lens slotting machining michina LY-12A